भुलेर पनि नलगाऊनुहोस छड्के सिन्दूर ! - Jagaran Post
Home/थप/समाज/भुलेर पनि नलगाऊनुहोस छड्के सिन्दूर !
भुलेर पनि नलगाऊनुहोस छड्के सिन्दूर !
२०७६ पुष २६, शनिबार १७:५१ गते
71 एक मिनेट भन्दा कम
तपाईंहामी हिन्दु परिवारका हौँ भने महिलाको सिउँदोमामात्र मात्र नभएर सिऊंदोको प्रयोग धार्मिक कार्यको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यद्यपि यहाँ हामी विवाहित महिलाले सिन्दूरको महत्व, प्रयोग, कुन समय र कसरि प्रयोग गर्नु उपर्युक्त हुन्छ भन्नेबारेमा चर्चा गर्नेछौं।
हिन्दु धर्मावलम्बी महिलाको लागि सिन्दूरलाई एक महत्वपूर्ण जिवनको पाटोको रुपमा लिईन्छ। हिन्दु धर्मक्रियाअनुसार जब एक पुरुष अर्की महिलासंग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन्छ, तब वैवाहिक जिवनको सवैभन्दा ठूलो निशानीको रुपमा महिलाको सिऊँदोमा सिन्दूर रहेको हुन्छ। विवाहित महिलाले आफ्नो सिऊंदोमा सिन्दूर लगाऊनुको आफ्नै ज्योतिषीय एवं सामाजिक मान्यता पनि छन।
त्यसैले सिन्दूरलाई कहिल्ल्यै पनि आफ्नो बालमा लुकाएर नलगाऊनुहोस। हाम्रो धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताअनुसार यदि कुनै महिलाले अफ्नो सिन्दूर बालसंगै लुकाएर लगाएमा उनको पति पनि समाजमा लुकेर बस्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक मानप्रतिष्ठा, सम्मान एवं प्रशंसावाट वंचित हुनेछन। त्यसैले सिन्दूरलाई सदैव सवैले देख्नेगरि सिऊँदोमा लामो बनाएर लगाऊनु जरुरी छ।
छड्के सिन्दूर पत्नीकै लागी घातक !
सामाजिक मान्यताअनुसार यदि महिलाले आफ्नो सिंऊंदोको विचमा सिन्दूर नलगाएर सिऊंदोभन्दा बाहिर अर्थात छड्के सिऊंदो लगाऊन शुरु गर्छिन भने उनको पतिले पनि बिस्तारै उनलाई रेखदेख नगर्ने, चासो नदिने तथा अन्त्यमा श्रीमतीदेखि नै टाढा हुन रुचाऊने अवस्था आऊन सक्तछ। त्यसैले भुलेर पनि सिन्दूरलाई सिऊँदोभन्दा बाहिर कहिल्ल्यै नलगाऊनुहोस।
सिन्दूर लगाऊने सहि तरिका सायद हरेक विवाहित महिलाहरुलाई थाहा नै होला। विवाहको दिन जब श्रीमानले श्रीमतीको सिऊँदोमा सिन्दूर लगाईदिन्छन, सोहि स्थानमा निरन्तर अर्ग्यानिक सिन्दूर लगाईरहनु उपर्युक्त हुन्छ। महिलाले सिन्दूर लगाऊनुको फाईदा र यसका वैज्ञानिक कारणबारे यसअंघिको अंकमा चर्चा गरिसकिएको छ।
एनआरएन (आईसीसी ) को उपाध्यक्षमा हिक्मत थापाको उम्मेदवारी
२०७६ भाद्र १०, मंगलवार १९:१३ गते
कसको चाड हो जनैपुर्णिमा?
२०७७ श्रावण १९, सोमबार १४:२६ गते
२०७६ असार १२, बिहीबार ०५:३१ गते
बालविवाह गराउने अभिभावकलाई जरिबाना
२०७६ असार १९, बिहीबार ०६:३९ गते